Abaqeqeshi abakhulu > iinkonzo > EZOTHUTHO NEZIKOLO
Abaqeqeshi abaninzi baye banikezela ngeSikole kunye neeKholeji zeThutho eMalta kubafundi abayizinkulungwane imihla ngemihla kuba i-1940 .......
Abaqeqeshi abahamba phambili banikezela izithuthi ezikolweni kwinani elikhulu lezikolo eMalta. Ukususela kwizikolo zikarhulumente, kwizikolo ezizimeleyo, izikolo zeelwimi zangaphandle kunye nezikolo zesonto.
Siyazingca ngokuba yinkampani yokuqala ekhuthaze kwaye iphuhlise indlela yendlela yebhasi enamanani abafundi abayaziyo namhlanje.
Njengoko siye sanikela le nkonzo ezikolweni ixesha elide kangangokuthi siyayiqonda ngokupheleleyo uxanduva lomsebenzi wokuthatha nokuzisa umntwana ngokuphepha ekhaya ukusuka kwisikolo ukuya kubazali bakhe imihla ngemihla.
Abaqhubi bethu bayakuqonda ukubaluleka koku kwaye bathobele iinkqubo ezingqongqo zokhuseleko nemimiselo eqinisekisa ukuba bonke abasebenzi besikolo kunye nabafundi bafika kwindawo abaya kuyo ngexesha, ngendlela ekhuselekileyo nefanelekileyo.
Iingqinisiso ezivela kwiZiko leMfundo esizikhonzayo
Ibali lobomi likaDe la Salle neParamount liye liyimpumelelo yembali yangempela. Iinkonzo ziye zazingenakulungeleka ngaphezu kweminyaka engamashumi amathathu. Nangona zonke iingxaki malunga neminyaka, i-Paramount ihlale iphakamisa iingxaki zothutho kunye nodumo kunye nokuthembeka. Andikhumbuli nasiphi na isiganeko xa isikolo kwafuneka sifune iindlela zendlela zothutho ukuzisa abafundi bethu kwiKholeji.
Inkonzo enikezelwa kwiDe la Salle yiParamount ibilokhu ihlala yinkxaso kunye kunye nokuphathwa kakuhle. Bathwala ngaphezu kwe-800 abafundi ukuya nakwiikholeji imihla ngemihla. Siyabonga kwaye. Amanqaku amaninzi. "
Bro. UMartin Borg FSC - UMlawuli
ISICELO SOKUTHUTHA IZIKOLO
I-De la Salle College, eMalta
Ikholeji yaseSt Edwards, eMalta